Mahery vaika ny fanafihan’ny valanaretina ao Toamasina: tratran’ny coronavirus ny mpitsabo mpanampy, mpiasan’ny fitsarana… | NewsMada
Par Taratra sur 13/05/2020
Tsy afa-bela mihitsy ny any Toamasina, ankoatra ny eto Antananarivo. Tratran’ny coronavirus koa ny mpitsabo mpanampy sy ny mpiasan’ny fitsarana ankoatra ireo sokajin’olona hafa, ao amin’ny faritra Atsinanana.
Nahitana tranga vaovao, miisa enina any Toamasina, araka ny tatitry ny antontanisa eny anivon’ny CCO, omaly. Miisa 20 ireo fitiliana natao tany Toamasina ka nahitana ireo tranga enina ireo. Tsy nisy olona vaovao tratran’ny Coronavirus kosa teto Antananarivo tamin’ireo fitiliana miisa 193 natao teny amin’ny CICM eny Ankatso. Na izany aza, nisy sitrana roa ka nitombo ho 107 ireo nalefa nody rehefa nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana.
Miisa 200 latsaka ireo tratran’ny Coronavirus
Tafakatra 192 izany izao ireo tratran’ny Covid-19 hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Mbola misy 85 ireo tazonina any amin’ny hopitaly.
Hatreto aloha izany, maro anisa hatrany ireo tsy afa-bela amin’ny valanaretina tato anatin’ny andro vitsy ho an’ny any Toamasina. Tsy maintsy misy avy any Atsinanana hatrany amin’ny tatitry ny CCO isan’andro ary mihoatra amin’ny isan’ny tranga eto Antananarivo ny any an-toerana. Raha 14 ireo voa ny herinandro teo, ny valo amin’ireo, avy any avokoa. Vao afakomaly koa, miisa 15 ireo tratran’ny Covid-19. Avy any Toamasina avokoa ny 11 raha efatra ny avy eto Antananarivo.
Mpitsabo mpanampy sy mpiasan’ny fitsarana…
Tanora vao erotrerony latsaky ny 18 taona avokoa ireo voa, raha ny tatitra, omaly.
Tsy vitan’izany fa ahitana mpianatra ho mpitsabo mpanampy sy «sage femme» miisa 4 tratran’ny Covid-19 any an-toerana. Tahaka izany koa, misy mpirakidraharaha sy mpilatsaka an-tsitrapo eo anivon’ny fitsarana, manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly. Efa nialohavan’ireo sokajin’asa sasany, toy ny tatsambo, ny mpivarotra, ny mpamily, ny orinasa,
Ny mpandraharaha amin’ny asa fandraisam-bahiny, ny trano fisakafoana, ary ny olon-tsotra samihafa tratry ny valanaretina.
Resaka politika sy hamafisan-doha…
Midika izany fa mahery vaika ny fifindran’ity valanaretina ity any an-toerana. Aiza ny olana? Inona ny fepetra hentitra sy henjana tokony horaisina, miaraka eo amin’ny tompon’andraikitra sy ny vahoaka? Ny tsirairay koa, tokony ho tompon’andraikitra amin’ny tenany sy ny eo ankohonany. Sa tena mafiloha koa ny mponina any an-toerana na misy antony politika tanteraka tokoa?